Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 25
Nahoana ny vato sarobidy no voatendry mandritra ny volana maromaro amin'ny taona? Moa ve izany dia vokatry ny zavatra hafa noho ny fanirian'ny olona?
Ireo vato ireo dia samy milaza fa samy hafa ny isan'ny olona, ​​ary misy karazana hatsaran-toetra sasany avy amin'ny vato sasany rehefa tratran'ny volana na mandritra ny vanim-potoana izay lazaina fa tokony hodiovina ireo. Ireo hevitra rehetra ireo dia tsy mety marina, ary ny ankamaroan'izy ireo dia azo inoana fa noho ny lolo. Saingy ny faniriana dia ny fiasa tsy mendrika ny saina na ny fisaintsainana diso hevitra momba ny fisainana; Na izany aza, ny fisainana dia ny sary manamboatra na manorina ny saina. Toy izany koa ny antony mahatonga ny sainam-pandinihana iray momba ny zavatra iray dia ny tontolon'ny tenany ihany, koa mety ho ny faniriana maro momba ny hatsaran-toetran'ireo vato dia noho ny hatsaran-toetra ao anaty vato sy ny fahalalana izay nisy taloha momba ny hatsaran-tarehy , saingy ny fahalavoana dia tsy misy afa-tsy ny hany faniriana fotsiny, na ny tsy fahampian'ny fiasan'ny saina, toy ny fandinihana ny fahalalana taloha izay voatahiry amin'ny fomban'ny lehilahy. Ny fitaovana rehetra dia ivontoerana izay mahatonga ny herin'ny natiora hanao zavatra. Ny zavatra sasany dia manolotra foibe matanjaka matanjaka ho an'ny hery hiasa noho ny zavatra hafa. Izany dia noho ny fandaminana ny singa amin'ny singa samihafa amin'ny ampahany kely. Ny metaly izay voaomana sy miasa ao anaty tariby dia hanolotra tsipika izay ahafahan'ny herinaratra atao any amin'ny teboka iray. Ny herinaratra dia tsy hihazakazaka amin'ny kofehy matevina, na dia mihazakazaka amin'ny tady varahina aza. Amin'ny fomba toy ny varahina ihany koa ny orinasa na mpitantana ny herinaratra, ny vato dia mety ho ivontoerana izay mahatonga ny hery sasany hiasa, ary satria ny copper dia mitondra mpitarika tsaratsara kokoa noho ny metaly hafa, toy ny zinc na ny tarika, noho izany ny vato sasany dia tsara kokoa foibe noho ny vato hafa. Ny fanadiovana ilay vato tsara kokoa dia toy ny ivon'ny hery.
Isan-kerinandro dia mitondra fiantraikany amin'ny tany sy ny zava-drehetra eto an-tany, ary raha ny vatosoa no manana ny toerany amin'ny maha-ivon-toerana azy, dia mety ny hieritreritra fa ny vato sasany dia mahery kokoa ho toy ny toby miaramila, nandritra ny fotoana nahatonga ny herin'ny volana ho mahery indrindra. Tsy azo eritreretina ny mihevitra fa ny fahalalana ny vanim-potoana dia ny vato dia nanana toetra tsara, ary noho izany, ireo izay efa fantatry ny olo-malaza dia nanolotra ny vato ho an'ny volana tsirairay. Ny mampifanaraka vato manan-danja manokana dia tsy misy ilàna azy na ity olona ity izay mety hamoaka ny fampahalalana azy amin'ny almanac na ny tantaram-pitenenana na ny olona sasany izay manana fampahalalana vitsivitsy toy ny tenany ihany. Raha mahatsiaro tena manokana ho an'ny vato ny olona iray, ankoatra ny sandam-barotra ara-barotra, ny vato dia mety hanana fahefana avy aminy na ho azy. Fa tsy misy ilàna azy ary mety hanimba ny famenoana ny hatsaran-toetra amam-panahy amin'ny vatosoa na ny lanjan'ny vato mandritra ny volana maromaro, satria miteraka fikolokoloana amin'io olona io ny miankina amin'ny zavatra hafahafa hanampy azy amin'ny zavatra tokony ho azony atao . Ny mibitsibitsika sy tsy manana antony marim-pototra amin'ny finoana dia manimba ny olona fa tsy manampy, satria manilika ny saina izany, mametraka izany amin'ny zavatra mahatsiravina, mahatonga azy hatahotra izay mitady azy amin'ny fiarovana, ary miankina amin'ny zavatra hafahafa fa tsy amin'ny tenany ihany amin'ny toe-javatra rehetra.
Misy diamondra na vato sarobidy hafa misy lanja hafa ankoatra izay maneho ny fari-bolan'ny vola? Ary, raha ny marina, miankina amin'ny inona ny lanjan'ny diamondra na vato hafa toy izany?
Ny vato tsirairay dia manan-danja hafa noho ny lanjany ara-barotra, fa amin'ny fomba tsy fantatry ny rehetra ihany ny sandam-barotra ara-barotra ka tsy ny rehetra no mahafantatra ny sandan'ny vato iray fa tsy ny sandan'ny vola. Ny olona iray tsy mahalala ny lanjan'ny diamondra tsy voatanisa dia afaka mandalo izany amin'ny maha-kisoa mahazatra azy. Saingy ilay mpamantatra izay mahalala ny hasarobidiny dia hiaro azy io, ka manapaka amin'ny fomba toy izany mba hanehoana ny hatsarany, ary hanome azy toerana tsara.
Ny sandan'ny vato iray dia miankina amin'ny maha-ivon-toerana tsara azy amin'ny fisarihana ireo singa na hery sasany sy ny fizarana izany. Ny vato samihafa dia misarika hery hafa. Tsy ny hery rehetra no mahasoa ny olona iray ihany. Ny hery sasany dia manampy ny sasany ary mandratra ny hafa. Ny vato iray izay manintona hery iray dia mety hanampy ny iray ary handratra ny iray hafa. Ny olona iray dia tokony hahalala izay tsara ho an'ny tenany, ary koa hahafantatra ny lanjan'ilay vato iray izay miavaka amin'ny hafa alohan'ny hahafahany manapa-kevitra amin'ny fomba mazava izay vato mety aminy. Tsy mitombina intsony ny fiheverana fa ny vato dia manana soatoavina sasany ankoatra ny sandan'ny volany, toy ny fiheverana fa ilay antsoina hoe vato lode dia manana sanda hafa noho ny sandany amin'ny vola Ny vato sasany dia ratsy amin'ny tenany, ny hafa dia manana hery na singa miasa mavitrika amin'ny alalan'izy ireo. Noho izany ny andriamby dia manana ny herin'ny andriamby miasa mavitrika ao aminy, fa ny vy malefaka dia ratsy ary tsy misy hery toy izany miasa amin'ny alalan'izany. Ny vato izay ivon'ny hery miasa dia tsy azo ovaina tsara; fa ny vato ratsy kosa dia azon'ny olona totofana ary anaovana ivon-kery hiasan'ny hery, amin'ny fomba mitovy amin'ny vy malemy azon'ny andriamby ary avy eo lasa andriamby. Ireo vato izay, toy ny andriamby, dia ivon-toerana iasan'ny hery iray na maromaro ireo izay nalamina araka ny natiora na iampangana hery na ampifandraisin'ny herin'ny isam-batan'olona. Ireo izay mitafy vato izay ivon-toerana matanjaka dia mety hisarika ny heriny manokana ho azy ireo, satria ny tselatra dia mety misarika ny tselatra. Raha tsy misy fahalalana ny vato toy izany sy ny soatoaviny avy, ny fanandramana hampiasa vato ho an'ity tanjona ity dia hiteraka fikorontanan-tsaina sy tsy fahalalana maha-minomino fotsiny. Tsy dia misy antony firy ny manao zavatra amim-piravoravoana amin’ny vato na amin’ny zavatra hafa ho an’ny asan’ny maizina, raha tsy hoe misy mahalala ny lalàna mifehy ny zavatra hampiasaina sy ny toetran’ilay olona na hery mifandray amin’izany. Ny fomba tsara indrindra amin'izay zavatra tsy fantatra dia ny manokatra ny maso sy ny saina ary ny mivonona hanaiky izay rehetra toa mitombina amin'izany zavatra izany, fa ny mandà tsy handray zavatra hafa.